Sida uu Alle naxariistiisa ugu baahiyay dunida oo dhan ayuu hadana ugu baahiyay, Xanuun oo dhan, Murugo oo dhan, Caajis oo dhan,iyo khatar oo dhan, waxaa lagaa doonayaa in aadan quusan oo ku xirto naftaada iyo rajadaada noloshaba Alleh, aadna noqtid mid Iimaan ahaan dagan, mar walbana wanaag iyo khayr rajeynaya.
MURUGADA WAA EDBIN
Muruga kuu celisa ama ku xusuusisa Allah waxay mar walba ka khayr badantahay farxadda ku hilmaansiisa nimcada Allah iyo addoonimada aad Alle addoonka u tahay, wax walba oo uu alle kuu doorto waxaad ogaataa in ay yihiin wax khayr leh, haddii wax ku murjiya ay kula kulmaan waa kuu edbin iyo digid lagaaga digayo in aad ku dhacdo dariiqa sheydaanka, haddii nimco lagugu mannaystana waxaad ogaataa in ay kuu tahay imtixaan ama tijaabo lagu tijaabinay inta aad tahay mid shukri badan, ama aad ku noqotid nimcadaas mid kibir badan oo xad gudbkiisu badan yahay.
Ku dhawaaq inta awooddaada ah oo ha ka xishoon kalimadaha wanaagsan ee afkaaga iyo qalbigaaga ay soo tufayaan, iskaga dhawaaq wax walba oo wanaagsan oo hadal ah, maxaa yeelay, waxaa laga yaabaa in ay tahay daawada qof wax badan sugayay hadalka nuucaas oo kale.
Hadalka wanaagsan waa sadaqo, sidaa darteed waxba hala xishoon ama ha yasin ee ku dhawaaq waa khayree.
Wajiyada qaarkood waa kuwa aysan is baddalin quruxdooda xitaa xilliga adag marka ay marayaan, ha noqoto marka la ceebeeyo, ha noqoto marka la dulleeyo, ha noqoto marka la murjiyo.
Halka wajiyada qaarkood uu shaki daboolo xitaa ayaga oo dhoola caddeynaya, Quruxda Wajiga waa mid kasoo burqata qalbiga qofka, sida uu mar walba yahay qalbigaada ayuuna noqonayaa wajigaada, kuma xirna quruxda wajiga inta jeer ee la nadiifiyo ama la turukeeyo.
QOFNA HA XAQIRIN
Ha ku xaqirin qofna dambi uu galay xitaa haddii aad aragto isaga oo Alle ku caasinaya ama galay dambi ka mid ah dambiyada waaween, waad u naseexeen kartaa balse ma xaqiri kartid, maxaa yeelay ma ogid adiga iyo isaga maalinta qiyaamaha qofka u dhawaanaya Allah.
NOLOSHA IYO DADKA
Nolosha lagama yaabo in ay ku siiso wax walba oo jeceshahay, balse qofka aad jeceshahay ama ku jecel waa laga yaabaa in uu ku siiyo wax nolosha ay ku siin weysay, maxaa yeelay iyaga ayaaba nolosheena oo dhan ah.
Haddaad rabtid in aad ogaatid qiimaha naxariiseed ee qalbigaada, bal eeg sida uu uga damqado dhibaatada dadka kale, jawaabta dhankaas kaaga soo baxdana waxaad ku ogaan kartaa heerka aad ka taagantahay bulshadaada iyo qiimaha naftaada.
HADDII AAD RABTID FARXAD
Haddii aad rabtid in aad ku noolaato nolol farxad leh ku xir naftaada ama yeelo hadaf aad tiigsato, ma ahan in aad isku xirtaa dadka iyo waxyaaba kale , maxaa yeelay waxaa badan qalbi jabka ka yimaada labadaas, inta badan oo aad yareysaa isku xirka labadaasna waa inta badan ay sii kororto farxaddaada.
AAMUSNAANTA WAA HUB QARSOON
Wey u malayn karaan qaarkeen in cafiska ama Saamaxadda ay tahay qayb ka mid daciifnimada qofka, sidaas si la mid ah waa loo fasiran karaa qofka aamusan in uu yahay qof dhooahan ama garashada ay ku yartahay, balse waxaa jirto laba shey oo aysan dadka inta badan ku fakarin kuwaas oo kala ah saamaxaadda iyo aamusnaanta.
Macna ahaan dadku ma dareensana qiimaha ay leeyihiin labadan ficil ama dhaqan oo uu qofku qaato, hadaba bal aniga oo soo koobaya aan macna kooban ka baxsho mid walba, waxaana u dhigi lahaa sidatan.
1 Saamaxaaddu awoodda ay leedahay waxaa lagu tilmaamaa in ay tahay quwad ama awood ka xoog badan Aargudashada, hadaba haddii aad ku fakari lahayd ama ku fakarto in aad aargudato waxaad ogaataa in saamaxaaddu ka xoog badantahay in aad aar gudato.
2 Aamusnaanta iyana waxaan ku macnayn lahaa mid ka xoog badan hadalka, qofka marka uu aamusanyahay macna ahaan lama garan karo waxa uu yahay ama damacsanyahay, balse tusaalooyin waa laga bixin karaa, dhabta ayaasa ah in qofka aamusnaanta badan uu yahay qof ka difaac wacan kan hadalka badan, maxaa yeelay hadalada qaar waxaa ku jira kuwa ku xira, balse haddii aadba aamusnatahay maxaa ku xiri kara ama lagaa fahmi karaa? ugu dambayn waxaan dhihi lahaa aamusnaanta waa awood aan muuqan, kana taya wanaagsan awoodaha la muujiyo.
SALAADDA HAKA TAGIN
Maalinta aad ka tagto Salaadda waxaad ogaataa in ay adna kaa tagtay Farxadda, Raaxada, daganaanta qalbiga ama qanacaada qalbiga,iyo barakada wax walba, ayna kuu bilaaban doonto wax walba oo xun ama murugo ah.